【 ဆောငျးပါး 】 “စကားတဈခှနျး” | Opinion Leaders
【 ဆောငျးပါး 】 “စကားတဈခှနျး”
“သူငယျခငျြး ခုန မငျးပွောလိုကျတဲ့စကား၊ ပွနျပွောစမျးပါဦး”
“မဟုတျပါဘူးကှာ ငါသသေခြောခြာပွနျကွားခငျြလို့ပါ။မငျးရဲ့စကားက ငါ့အတှကျ ဘယျလောကျအရေးကွီးတယျဆိုတာ မငျးသိပါတယျ”
“အေးလေ ပွောဆိုလညျး ပွောရတာပေါ့။မငျးမိနျးမကို ကောငျတဈကောငျနဲ့တှဲပွီးတှတေ့ာ နှဈခါ၊ သုံးခါရှိပွီ။အဲဒီအအေးဆိုငျမှာခညျြးပဲ။သူတို့နှဈယောကျထဲ စကားပွောနတော တဈနာရီကြျောကြျောလောကျကွာတယျ။အဲဒီကောငျကလညျး ယောင်ျကြားရငျ့မကွီးဖွဈပွီးတော့ မကျြရညျက ဘာလှယျသလဲ မမေးနဲ့။အေးလေ အဲဒီလောကျအခြှဲကောငျးလို့ မငျးမိနျးမကွှတောဖွဈမှာပေါ့။ဒီကောငျမကျြရညျသုတျဖို့ လကျကိုငျပဝါတောငျ ထုတျပေးလိုကျသေးတယျ”
မိတျဆှတေဈယောကျဆီသှားရငျး သူတို့လမျးထိပျက လကျဖကျရညျဆိုငျမှာ နှဈယောကျသား လကျဖကျရညျသောကျနစေဉျက ဖွဈသညျ။တဈဖကျစားပှဲဝိုငျးမှ လူငယျနှဈယောကျ၏ စကားသံမြားကိုကွားနရေ၍ စိတျဝငျစားသှားသဖွငျ့ တမငျနားစှငျ့ထားမိသညျ။စကားဆကျပွောသံမကွားရတော့။
ခဏအကွာတှငျ ကာယကံရှငျသူငယျခငျြး ဒေါသတကွီးနှငျ့ လကျဖကျရညျဆိုငျထဲမှ ထှကျသှားသညျ။သတငျးပေး သူငယျခငျြးကတော့ တဈယောကျထဲကနျြရဈပွီး အတနျကွာမှပွနျသှားသညျ။
သူတို့နှဈယောကျလုံးမရှိတော့မှ မိတျဆှဖွေဈသူကို မေးကွညျ့တော့ တဈဖကျလမျးမှ သူငယျခငျြးနှဈယောကျဖွဈပွီး တဈယောကျမှာ လူပြိုဖွဈ၍ တဈယောကျမှာ အိမျထောငျသညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
နောကျတဈပါတျခနျ့အကွာတှငျ စကားစပျမိ၍ မိတျဆှထေံမှသိရသညျမှာ အိမျထောငျသညျသူငယျခငျြး ဇနီးမောငျနှံမှာ တရားဝငျကှဲကှာသှားကွကွောငျး သိရသညျမို့၊ မဆီမဆိုငျ စိတျမကောငျးဖွဈမိသညျ။ပို၍ဝမျးနညျးစရာကောငျးသညျမှာ ထိုအိမျထောငျရှငျမိနျးကလေးနှငျ့ အအေးဆိုငျမှာတှေ့၍ မကျြရညျလှယျသညျဆိုသော ကောငျလေးမှာ သူမ၏ အမဘေကျမှ မောငျဝမျးကှဲတျောစပျလကျြ အဆုတျကငျဆာကွောငျ့ အားငယျကာ စိတျဓာတျကနြသေဖွငျ့ သူမကသတငျးမေးရငျး နှဈသိမျ့ပေးခဲ့ရကွောငျးဖွဈသညျ။
ကြှနျတျောစိတျမကောငျးဖွဈရသညျက ငယျငယျရှယျရှယျ အိမျထောငျသညျဘဝမှာ မခမျြးသာမကွီးပှားသေးသျောလညျး သနျ့စငျသောခဈြခွငျးမတ်ေတာနှငျ့ အေးအေးခမျြးခမျြး လြှောကျလှမျးနပေါလကျြ “စကားတဈခှနျး” ကွောငျ့ အိမျထောငျတဈခု လုံးဝပကျြစီးသှားခွငျးအတှကျဖွဈသညျ။
စကားတဈခှနျးသညျ ပွောသူအတှကျရော နားထောငျသူအတှကျပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှငျ့ မဖွဈစလောကျဟု ထငျရသျောလညျး တကယျ့လကျတှမှေ့ာတော့ အမွဲတမျးပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိမနပေါ။
တဈစုံတဈယောကျက “မောငျမောငျရေ” ဟု ချေါလိုကျသညျဆိုပါစို့။
“ဘာလုပျမလို့လဲ” စသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးတုံ့ပွနျနိုငျပါသညျ။
ဘယျစကားကပိုကောငျးမလဲ။ပိုသငျ့တျောမလဲ။ပို၍နားဝငျခြိုမလဲ။တဈဖကျလူအပျေါ ပို၍အလေးအနကျထားရာ၊ ရငျးနှီးရာ၊ ယဉျကြေးရာ ရောကျမလဲ။
ပွောသူက အလှယျတကူပွောလိုကျသျောလညျး နားထောငျသူဘကျမှာ အဓိပ်ပါယျအမြိုးမြိုး သကျရောကျသှားနိုငျပါ သညျ။ကိုယျတိုငျရော၊ တဈဖကျလူအပျေါမှာပါ တနျဖိုးထားတတျသူမြားကမူ စကားတဈခှနျးကို အလှယျတကူမပွောတတျကွပါ။အမြိုးမြိုးခြိနျဆပွီးမှ ပွောကွပါသညျ။
အပွဈတဈခုခု ကြူးလှနျထားသော လူငယျတဈယောကျကို ဆုံးမမညျဆိုပါစို့။လကျနှငျ့ရိုကျ၍ ဆုံးမခွငျးထကျ နှုတျဖွငျ့အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ ပွောဆိုဆုံးမခွငျးက ထိုကလေး၏ စိတျဓာတျကို အနာမဖွဈစဘေဲ ကောငျးသညျ့ဘကျသို့ရောကျအောငျ ပွုပွငျနိုငျပသေညျ။
သို့သျော ‘မရိုကျမနှကျဘဲ စကားလုံးနဲ့ဆုံးမတာပဲ နားထောငျရမှာပေါ့’ ဟု ပွီးပွီးရောပွော၍တော့လညျး မဖွဈနိုငျပါ။စကားလုံးနှငျ့ဆုံးမတာ ကောငျးသျောလညျး ခြိုသာသောစကား၊ နားဝငျလှယျသောစကား ဖွဈသငျ့သညျ။အရေးအကွီးဆုံးကတော့ တဈဖကျသားအပျေါ မနှိမျဖို့၊ လှနျကဲသောဖိအားမြိုးနှငျ့ မပွောမိစဖေို့ လိုပါသညျ။
လကျကမရိုကျသျောလညျး နှုတျမှ ‘မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမလေး’ ဟု ပွောလိုကျခွငျးမြိုးကွောငျ့ ကလေး၏စိတျထဲတှငျ မခံမရပျနိုငျဖွဈသှားစနေိုငျသညျ။ဆုံးမသူအပျေါ နာကွညျးသှားတတျသညျ့အပွငျ ကောငျးသညျ့စိတျဖွဈပျေါဖို့ အခှငျ့အရေး လုံးဝပကျြစီးသှားနိုငျပသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ ‘ကြောပူတာခံခငျြသညျ၊ နားပူတော့မခံနိုငျ’ ဟု ဆိုကွခွငျးဖွဈသညျ။
‘နှုတျခြို သြှိုတဈပါး’၊ ‘နှုတျကွောငျ့ ပွညျစိုး’၊ ‘ကွမျးကြှံလြှငျ နုတျ၍ရသညျ၊ စကားကြှံလြှငျ နုတျ၍မရ’၊ ‘စကားစကားပွောတာမြား စကားထဲကဇာတိပွ’၊ ‘ထောငျတနျတဲ့စကားရယျပေါ့’ ဟူ၍၊ “စကားတဈခှနျး” ၏ အရေးပါပုံ၊ တနျဖိုးကွီးပုံကို အစဉျအဆကျ အလေးထားဖျေါပွခဲ့ကွလသေညျ။
တရုတျအဆိုအမိနျ့တဈခု ကွားဖူးပါသညျ။‘လူအခငျြးခငျြး ဆကျဆံရာတှငျ အိတျကပျထဲမှာ ပိုကျဆံဆောငျထားပါ။သို့မဟုတျလြှငျ ပါးစပျထဲမှာ ပြားရညျဆောငျထားပါ’ ဟု ဖွဈသညျ။နှုတျထှကျစကားတဈခှနျး၏ တနျဖိုးကွီးမားပုံကို ထငျရှားစပေါသညျ။အလှနျမှတျသားလိုကျနာစရာ ကောငျးလှပသေညျ။
အကုသိုလျဆယျပါးတှငျ ကာယကံသုံးပါး၊ မနောကံသုံးပါးရှိပွီး ဝစီကံအနနှေငျ့ လေးပါးရှိပါသညျ။
(၁) မုသာဝါဒ (falsehood) လိမျညာပွောသောစကား
(၂) ဖရုသဝါစာ (harsh speak) ကွမျးတမျးရိုငျးစိုငျးသောစကား
(၃) သမ်ဖပ်ပလာပဝါစာ (vain talk) အကြိုးမဲ့ သိမျဖငျြးသောစကား
(၄) ပိသုဏဝါစာ (slander) တဈပါးသူတို့ အခဈြပကျြအထငျလှဲအောငျ ပွောသောစကားတို့ ဖွဈသညျ။
စကားအပွောအဆို မတတျသညျ့အတှကျ သူတဈပါးလညျး ထိခိုကျနဈနာစပွေီး ကိုယျတိုငျလညျး အပွဈဖွဈပါသညျ။
ပါးစပျကလေးလှုပျ၍ လသေံထှကျပျေါလာပုံခငျြး တူသျောလညျး ထှကျလာသောစကား၏ အဓိပ်ပါယျအလေးအပေါ့၊ အကြိုးအပွဈ၊ လိုရငျးရောကျမရောကျ စသညျဖွငျ့ စှမျးအား (power) ခငျြး ကှာခွားလှနျးလှသညျ။ပါးစပျကလေးဟကာ အခကျအခဲမရှိပွောနိုငျတိုငျး စကားတဈခှနျးကို အလှယျတကူမပွောသငျ့ပါ။
စကားတဈခှနျးသညျ ပွောသူ၊ နားထောငျသူ၊ အခွားတဈယောကျ၏ ကောငျးကြိုးတော့ရရှိပါမှ တနျဖိုးရှိပမေညျ။
လှယျလှယျပွော၍ရသောကွောငျ့ လူတျောတျောမြားမြားက စကားကိုလှယျလှယျပွောတတျကွ၏။အမှနျဆိုလြှငျ ကိုယျ့ပွောစကားတဈခှနျးကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျသော ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးမြားကို သတိထားဆငျခွငျပွီးမှသာ နှုတျမှဖှငျ့ဟသငျ့ပါသညျ။
ပညာရှိတို့သညျ စကားတဈခှနျးကို အလှယျတကူမပွောတတျကွပါ။စကားကို ခွှတောကွပါသညျ။မပွောမဖွဈသညျ့ အခွအေနမြေိုးတှငျမှ ပွောကွသညျ။
ဂရိအတှေးအချေါပညာရှငျကွီး Diogenes က “We have two ears and only one tongue in order that we may hear more and speak less.” (ကြှနျတျောတို့မှာ နားရှကျနှဈဖကျရှိပွီး လြှာတဈခုတညျးသာရှိသညျ။ထို့ကွောငျ့ မြားမြားနားထောငျ၍ နညျးနညျးပွောပါ) ဟု သတိပေးထားပါသညျ။
တဈခါတလေ ကိုယျက စတေနာအရငျးခံနှငျ့ အမှနျအတိုငျးပွောသညျ့စကား ဖွဈသျောလညျး တဈဖကျသားက အဓိပ်ပါယျလှဲ၍လကျခံတာမြိုး၊ ကိုယျ့စတေနာကို ပွောငျးပွနျမွငျတာမြိုး ကွုံရတတျပါသညျ။
ကြှနျတျော ဆယျတနျးကသြညျ့နှဈက ကြှနျတေျာ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတဈယောကျ စာမေးပှဲအောငျပါသညျ။သူက အငျဂငျြနီယာလိုငျး မှနျးထားသူဖွဈ၏။အမှတျစာရငျးထှကျလာသောအခါ အငျဂငျြနီယာလိုငျးကို မမီခဲ့ပေ။ကြှနျတျောလညျး သူငယျခငျြးစိတျအားငယျမညျစိုး၍ အားပေးစကားအနနှေငျ့ “ရိုးရိုးမဂြောနဲ့ပဲ မဟာသိပ်ပံတို့၊ မဟာဝိဇ်ဇာတို့ ယူလညျးရတာပဲ” ဟု ပွောလိုကျမိသညျ။
ထိုနမှေ့စပွီး သူ ကြှနျတေျာ့ကို စကားမပွောတော့ပါ။ကြှနျတျောက စာမေးပှဲကလြို့ သူအငျဂငျြနီယာဖွဈမှာကို မနာလိုဖွဈနကွေောငျး၊ သူငယျခငျြးမပီသကွောငျး၊ စိတျဓာတျအောကျတနျးကကြွောငျး လြှောကျပွောသညျ။
ထိုစဉျကတော့ ငယျသူခငျြးမို့ စတေနာကို တလှဲထငျရကောငျးလားဟု မာနခငျြးပွိုငျကာ ကြှနျတျောကလညျး သူ့ကိုမချေါတော့ပါ။အသကျအရှယျတှရေ၊ အိမျထောငျတှကြေ၊ သားသမီးတှရေပွီး ကြောငျးတျောကွီးမှာ နှဈစဉျကငျြးပသညျ့ ဆရာကနျတော့ပှဲမှာ အတူဆုံကွတော့မှ အပွနျအလှနျတောငျးပနျဖွဈကွသညျ။
ကြှနျတျောကတော့ Saying nothing is better than saying any error. ဆိုသကဲ့သို့ ‘အမှားတဈခုခုပွောတာနဲ့ စာရငျ၊ ဘာမှမပွောတာပိုကောငျးတယျ’ ဟု သဘောပေါကျလိုကျပါသညျ။
တဈဖကျလူအပျေါ စတေနာထားသညျမှနျသျောလညျး ကိုယျ့စကားမှနျဖို့၊ ထိုသူမှာလညျး တကယျအကြိုးရှိနိုငျဖို့လိုပါသညျ။လောကမှာ အပွောသငျ့ဆုံးစကား နှဈမြိုးသာရှိပါသညျ။
မှနျလညျးမှနျ၊ အကြိုးလညျးရှိပွီး တဈဖကျလူနားထောငျခငျြသော စကားနှငျ့ မှနျလညျးမှနျ၊ အကြိုးလညျးရှိသျောလညျး တဈဖကျလူနားမထောငျခငျြသော စကားတို့ဖွဈသညျ။
သညျတော့ စကားတဈခှနျးပွောမညျဆိုလြှငျ၊ ထိုစကားသညျ တဈဖကျသားနားထောငျခငျြစိတျ ရှိခငျြလညျးရှိမညျ။ရှိခငျြမှလညျးရှိမညျ။မလှဲမသှရှေိအပျသညျ့ စကားအရညျအခငျြးကတော့ မှနျကနျ၍ အကြိုးကြေးဇူးရှိရနျသာဖွဈ၏။
မှနျသောစကား (သစ်စာစကား) သညျ အလှနျအငျအားကောငျးပွီး၊ အကြိုးလညျးကွီးမားပါသညျ။
ငါးရာ့ငါးဆယျ၊ ဝဋ်ဋကဇာတျတှငျ ဘုရားလောငျးသညျ ငုံးငှကျဘဝဖွဈခဲ့၏။ဥမှပေါကျပွီး မကွာသောအခြိနျတှငျ သူနသေောတောအုပျ၌ မီးလောငျလေ၏။တိရစ်ဆာနျပေါငျးစုံတို့လညျး တောမီးမှလှတျရာသို့ ပွေးကုနျ၏။အလောငျးတျော ငုံးငှကျ၏ မိဘနှဈပါးသညျလညျး တောမီးကိုကွောကျ၍ ကိုယျလှတျပွေးကွပွနျ၏။ငုံးငှကျကလေးသညျ မသှားနိုငျမပြံနိုငျနှငျ့ တောမီး သူ့ကိုလောငျကြှမျးမညျ့အခြိနျကို စောငျ့မြှျောနရေရှာ၏။ထိုအခါ ငုံးငှကျငယျသညျ သစ်စာစကားဆိုလသေညျ။
“ငါ့မှာအတောငျမြားရှိပါသျောလညျး မပြံနိုငျပါ။ငါ့မှာခွထေောကျရှိသျောလညျး မလြှောကျနိုငျပါ။မိဘနှဈပါးရှိသျောလညျး ထှကျပွေးကွလပွေီ။ဤမှနျသောသစ်စာစကားကွောငျ့ အသငျတောမီးသညျ ငါ့ကိုမလောငျစသေတညျး”
အလောငျးတျော ငုံးငှကျ၏ သစ်စာစကားကွောငျ့ တဈတောလုံးကို အရှိနျပွငျးစှာလောငျနသေောမီးသညျ ငုံးငှကျကလေးရှိသညျ့ နရောတဈဝိုကျကို လုံးဝမီးမလောငျခဲ့ပေ။သစ်စာစကား၏ အကြိုးအာနိသငျကား ကွီးမားလှလသေညျ။
သစ်စာစကားဆိုသူမှာ စိတျသနျ့ရှငျးသညျ့အတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှု (self-confidence) အပွညျ့အဝရှိသညျ။မုသားစကားဆိုသူမှာ တဈလောကလုံးကိုညာလြှငျ ညာနိုငျမညျဖွဈသျောလညျး သူ့ကိုယျသူတော့ ညာ၍မရနိုငျပေ။ထို့ကွောငျ့ သူ့စိတျမသနျ့ရှငျးသညျ့အတှကျ စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှု၊ ထိတျလနျ့အားငယျမှုတို့ဖွဈကာ self-confidence လုံးဝမရှိနိုငျပေ။
(တဈခါတရံ) မှနျသျောလညျး ဘယျသူ့အတှကျမှအကြိုးမရှိ (အကြိုးပငျယုတျလြော့စတေတျသေးသညျ) သော စကားမြိုးလညျးရှိ၏။ခွထေောကျမသနျမစှမျးသောသူကို “လမျးလြှောကျတာ ထော့နဲ့ထော့နဲ့နှငျ့” ဟု ပွောတာမြိုး၊ ရုပျရညျအကညျြးတနျသူကို “ရုပျကလညျး ဆိုးလိုကျတာလှနျရော” ဟု ပွောတာမြိုးသညျ စိတျဓာတျသေးသိမျ ညံ့ဖငျြးသူတို့ ပွောလရှေိ့၏။
အခွအေမွဈမရှိသညျ့ ကောလာဟလစကား (rumour) မြိုး၊ အသိဉာဏျတဈစုံတဈခု မရရှိနိုငျသော ညဈညမျးပေါ့ပကျြသညျ့ စကားမြိုးသညျလညျး အကြိုးမရှိ သိမျဖငျြးယုတျညံ့သောစကား (သမ်ဖပ်ပလာပဝါစာ) ဖွဈ၍ မပွောဆိုသငျ့ပါ။အခြိနျဖွုနျးရုံသကျသကျ မညျကာမတ်တစကားမြားသာဖွဈ၍ အကြိုးမရှိဘဲ အကငျြ့ပကျြရုံသာရှိပမေညျ။
ဆဲဆိုတိုငျးထှာသော၊ မောကျမာရိုငျးစိုငျးသော၊ မာနျမဲဟိနျးဟောကျသော၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအထငျကွီး ဘဝငျမွငျ့ကာ တဈဖကျသားကိုခြိုးနှိမျသော၊ ကွမျးတမျးသောစကား (ဖရုသဝါစာ) သညျလညျး တဈဖကျသားအတှကျ ထိတျလနျ့အားငယျစိတျ၊ ဒေါသမာနစိတျဖွဈစသေောကွောငျ့ မပွောဆိုသငျ့ပါ။ကွမျးတမျးယုတျမာသောစကားကို ကိုယျတိုငျလညျး မခံယူခငျြကွသလို၊ ဘယျသူကမှလညျး မခံယူခငျြကွပါ။
တခြို့အသကျအရှယျကွီးရငျ့သူ၊ ရာထူးကွီးမွငျ့သူ၊ ပိုကျဆံခမျြးသာသူ၊ ရုပျရညျခြောမောသူ၊ မြိုးရိုးမွငျ့သူ၊ အောငျမွငျကြျောကွားသူတို့သညျ ကိုယျ့ထကျနိမျ့သူတို့အပျေါ မောကျမောကျမာမာ ပွောဆိုကွသညျ။ဖိနှိပျခြိုးနှိမျပွောဆိုကွသညျ။သူတဈပါးဂုဏျသိက်ခာကိုလညျးမလေးစား၊ ကိုယျ့ဂုဏျသိက်ခာကိုလညျး တနျဖိုးမထားတတျသူမြားဖွဈ၏။တဈဖကျစီးနငျး ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျးပွောသညျ့စကားမြိုး၊ အသံမြိုးကို လူ လူခငျြးမဆိုထားနှငျ့ အသိဉာဏျမရှိသညျ့ တိရစ်ဆာနျပငျမကွိုကျပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ပိသုဏဝါစာ ဖွဈမညျထငျသညျ။သူတဈပါးဂုဏျသိက်ခာ ညှိုးနှမျးအောငျ၊ အခငျြးခငျြးစိတျဝမျးကှဲအောငျ၊ အခဈြပကျြအောငျ၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခု မညီညှတျအောငျ ပွောဆိုသောစကားမြိုးဖွဈ၍ အလှနျအောကျတနျးကပြသေညျ။
မိတျဆှနှေဈယောကျကွားမှာပွောလြှငျ ထိုမိတျဆှအေခငျြးခငျြး အခငျမငျပကျြမညျ။သတျကွဖွတျကွသညျအထိဖွဈကာ အသကျတှေ၊ ဘဝတှေ ပကျြစီးနိုငျသညျ။လငျမယားကွားမှာပွောလြှငျ သူမြားအိမျထောငျရေး ပကျြပွားမညျ။မိသားစုအသိုကျအမွုံတဈခု ပကျြစီးသှားပလေိမျ့မညျ။
လူ့လောကတှငျ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး ‘ကံ’ ကား ပဉ်စာနန်တရိယကံဖွဈသညျ။သသေညျနှငျ့တဈပွိုငျနကျ ငရဲသို့ မလှဲမသှကေရြောကျစသေော အကုသိုလျကံဖွဈလသေညျ။
(၄) ဘုရားရှငျအား သှေးစိမျးတညျအောငျပွုခွငျးနှငျ့
ညီညှတျနသေော ရဟနျးသံဃာတို့ကွားတှငျ ညီညှတျမှုပကျြပွားအောငျ၊ စိတျဝမျးကှဲအောငျပွောဆိုသော စကားတဈခှနျးကွောငျ့ ကိုယျတိုငျလညျး အပ်ပါယျသို့သှားရပမေညျ။ဗုဒ်ဓသာသနာကို စောငျ့ရှောကျနသေော ရဟနျးသံဃာတို့ကို နှောငျ့ယှကျခွငျးကွောငျ့ သာသနာကိုဖကျြရာလညျး ရောကျပါသညျ။
စကားတဈခှနျးကွောငျ့ လူအခငျြးခငျြး မုနျးတီးသှားနိုငျသညျ။ခဈြခငျလာနိုငျသညျ။လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဟူသော အကုသိုလျတှဖွေဈပှားပွီး အပ်ပါယျလားနိုငျသကဲ့သို့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာဟူသော ကုသိုလျတရားတှပှေားမြားပွီး သံသရာဆငျးရဲမှပငျ လှတျစနေိုငျပါသညျ။
စကားတဈခှနျးကွောငျ့ အိဿာ၊ မစ်ဆရိယဟူသော မနာလို၊ ဝနျတိုမှုတှနှေငျ့ ပူလောငျနိုငျသကဲ့သို့ ကရုဏာ၊ မုဒိတာဟူသော ကွငျနာသနားစိတျ၊ ဝမျးမွောကျပီတိစိတျမြားနှငျ့ အေးခမျြးနိုငျပါသညျ။ထို့ကွောငျ့ မိမိ၏စကားတဈခှနျးနှငျ့ အခွားသူတှကေို ဒုက်ခဝဒေနာခံစားစမေညျလား၊ သုခဝဒေနာစံစားစမေညျလား စဉျးစားခငျြ့ခြိနျသငျ့ပသေညျ။ပွောသူက ပညာသတိနှငျ့ ဆငျခွငျပွောသငျ့သကဲ့သို နားထောငျသူကလညျး ပညာသတိနှငျ့ ဆငျခွငျနားထောငျ သငျ့သညျ။
ကိုယျ့စကားတဈခှနျးနှငျ့ သူ့အသကျကို သတျမှာလား၊ ကယျမှာလား။ဘဝပကျြစမှောလား၊ ဘဝဆကျစမှောလား။ဆငျးရဲသှားစမှောလား၊ ခမျြးသာလာစမှောလား။ဆုံးရှုံးစမှောလား၊ အောငျမွငျစမှောလား။
မညျသို့ပငျဆိုစေ။ The value ofaspeech is infinity for both of merit and evil. ကုသိုလျနှငျ့ အကုသိုလျ နှဈခုလုံးအတှကျ ‘စကားတဈခှနျး’ ၏ တနျဖိုးသညျ အတိုငျးအဆမရှိပါ။
ဧပွီ - ၃၀
“သူငယ်ချင်း ခုန မင်းပြောလိုက်တဲ့စကား၊ ပြန်ပြောစမ်းပါဦး”
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ ငါသေသေချာချာပြန်ကြားချင်လို့ပါ။မင်းရဲ့စကားက ငါ့အတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မင်းသိပါတယ်”
“အေးလေ ပြောဆိုလည်း ပြောရတာပေါ့။မင်းမိန်းမကို ကောင်တစ်ကောင်နဲ့တွဲပြီးတွေ့တာ နှစ်ခါ၊ သုံးခါရှိပြီ။အဲဒီအအေးဆိုင်မှာချည်းပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ထဲ စကားပြောနေတာ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာတယ်။အဲဒီကောင်ကလည်း ယောင်္ကျားရင့်မကြီးဖြစ်ပြီးတော့ မျက်ရည်က ဘာလွယ်သလဲ မမေးနဲ့။အေးလေ အဲဒီလောက်အချွဲကောင်းလို့ မင်းမိန်းမကြွေတာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီကောင်မျက်ရည်သုတ်ဖို့ လက်ကိုင်ပဝါတောင် ထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်”
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီသွားရင်း သူတို့လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ နှစ်ယောက်သား လက်ဖက်ရည်သောက်နေစဉ်က ဖြစ်သည်။တစ်ဖက်စားပွဲဝိုင်းမှ လူငယ်နှစ်ယောက်၏ စကားသံများကိုကြားနေရ၍ စိတ်ဝင်စားသွားသဖြင့် တမင်နားစွင့်ထားမိသည်။စကားဆက်ပြောသံမကြားရတော့။
ခဏအကြာတွင် ကာယကံရှင်သူငယ်ချင်း ဒေါသတကြီးနှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှ ထွက်သွားသည်။သတင်းပေး သူငယ်ချင်းကတော့ တစ်ယောက်ထဲကျန်ရစ်ပြီး အတန်ကြာမှပြန်သွားသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမရှိတော့မှ မိတ်ဆွေဖြစ်သူကို မေးကြည့်တော့ တစ်ဖက်လမ်းမှ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်မှာ လူပျိုဖြစ်၍ တစ်ယောက်မှာ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်တစ်ပါတ်ခန့်အကြာတွင် စကားစပ်မိ၍ မိတ်ဆွေထံမှသိရသည်မှာ အိမ်ထောင်သည်သူငယ်ချင်း ဇနီးမောင်နှံမှာ တရားဝင်ကွဲကွာသွားကြကြောင်း သိရသည်မို့၊ မဆီမဆိုင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ပို၍ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ထိုအိမ်ထောင်ရှင်မိန်းကလေးနှင့် အအေးဆိုင်မှာတွေ့၍ မျက်ရည်လွယ်သည်ဆိုသော ကောင်လေးမှာ သူမ၏ အမေဘက်မှ မောင်ဝမ်းကွဲတော်စပ်လျက် အဆုတ်ကင်ဆာကြောင့် အားငယ်ကာ စိတ်ဓာတ်ကျနေသဖြင့် သူမကသတင်းမေးရင်း နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ရကြောင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ မချမ်းသာမကြီးပွားသေးသော်လည်း သန့်စင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အေးအေးချမ်းချမ်း လျှောက်လှမ်းနေပါလျက် “စကားတစ်ခွန်း” ကြောင့် အိမ်ထောင်တစ်ခု လုံးဝပျက်စီးသွားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
စကားတစ်ခွန်းသည် ပြောသူအတွက်ရော နားထောင်သူအတွက်ပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် မဖြစ်စလောက်ဟု ထင်ရသော်လည်း တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အမြဲတမ်းပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိမနေပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က “မောင်မောင်ရေ” ဟု ခေါ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။
“ဘာလုပ်မလို့လဲ” စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နိုင်ပါသည်။
ဘယ်စကားကပိုကောင်းမလဲ။ပိုသင့်တော်မလဲ။ပို၍နားဝင်ချိုမလဲ။တစ်ဖက်လူအပေါ် ပို၍အလေးအနက်ထားရာ၊ ရင်းနှီးရာ၊ ယဉ်ကျေးရာ ရောက်မလဲ။
ပြောသူက အလွယ်တကူပြောလိုက်သော်လည်း နားထောင်သူဘက်မှာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး သက်ရောက်သွားနိုင်ပါ သည်။ကိုယ်တိုင်ရော၊ တစ်ဖက်လူအပေါ်မှာပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူများကမူ စကားတစ်ခွန်းကို အလွယ်တကူမပြောတတ်ကြပါ။အမျိုးမျိုးချိန်ဆပြီးမှ ပြောကြပါသည်။
အပြစ်တစ်ခုခု ကျူးလွန်ထားသော လူငယ်တစ်ယောက်ကို ဆုံးမမည်ဆိုပါစို့။လက်နှင့်ရိုက်၍ ဆုံးမခြင်းထက် နှုတ်ဖြင့်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောဆိုဆုံးမခြင်းက ထိုကလေး၏ စိတ်ဓာတ်ကို အနာမဖြစ်စေဘဲ ကောင်းသည့်ဘက်သို့ရောက်အောင် ပြုပြင်နိုင်ပေသည်။
သို့သော် ‘မရိုက်မနှက်ဘဲ စကားလုံးနဲ့ဆုံးမတာပဲ နားထောင်ရမှာပေါ့’ ဟု ပြီးပြီးရောပြော၍တော့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။စကားလုံးနှင့်ဆုံးမတာ ကောင်းသော်လည်း ချိုသာသောစကား၊ နားဝင်လွယ်သောစကား ဖြစ်သင့်သည်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့ တစ်ဖက်သားအပေါ် မနှိမ်ဖို့၊ လွန်ကဲသောဖိအားမျိုးနှင့် မပြောမိစေဖို့ လိုပါသည်။
လက်ကမရိုက်သော်လည်း နှုတ်မှ ‘မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမလေး’ ဟု ပြောလိုက်ခြင်းမျိုးကြောင့် ကလေး၏စိတ်ထဲတွင် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သွားစေနိုင်သည်။ဆုံးမသူအပေါ် နာကြည်းသွားတတ်သည့်အပြင် ကောင်းသည့်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အခွင့်အရေး လုံးဝပျက်စီးသွားနိုင်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ‘ကျောပူတာခံချင်သည်၊ နားပူတော့မခံနိုင်’ ဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
‘နှုတ်ချို သျှိုတစ်ပါး’၊ ‘နှုတ်ကြောင့် ပြည်စိုး’၊ ‘ကြမ်းကျွံလျှင် နုတ်၍ရသည်၊ စကားကျွံလျှင် နုတ်၍မရ’၊ ‘စကားစကားပြောတာများ စကားထဲကဇာတိပြ’၊ ‘ထောင်တန်တဲ့စကားရယ်ပေါ့’ ဟူ၍၊ “စကားတစ်ခွန်း” ၏ အရေးပါပုံ၊ တန်ဖိုးကြီးပုံကို အစဉ်အဆက် အလေးထားဖေါ်ပြခဲ့ကြလေသည်။
တရုတ်အဆိုအမိန့်တစ်ခု ကြားဖူးပါသည်။‘လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရာတွင် အိတ်ကပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဆောင်ထားပါ။သို့မဟုတ်လျှင် ပါးစပ်ထဲမှာ ပျားရည်ဆောင်ထားပါ’ ဟု ဖြစ်သည်။နှုတ်ထွက်စကားတစ်ခွန်း၏ တန်ဖိုးကြီးမားပုံကို ထင်ရှားစေပါသည်။အလွန်မှတ်သားလိုက်နာစရာ ကောင်းလှပေသည်။
အကုသိုလ်ဆယ်ပါးတွင် ကာယကံသုံးပါး၊ မနောကံသုံးပါးရှိပြီး ဝစီကံအနေနှင့် လေးပါးရှိပါသည်။
(၁) မုသာဝါဒ (falsehood) လိမ်ညာပြောသောစကား
(၂) ဖရုသဝါစာ (harsh speak) ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းသောစကား
(၃) သမ္ဖပ္ပလာပဝါစာ (vain talk) အကျိုးမဲ့ သိမ်ဖျင်းသောစကား
(၄) ပိသုဏဝါစာ (slander) တစ်ပါးသူတို့ အချစ်ပျက်အထင်လွဲအောင် ပြောသောစကားတို့ ဖြစ်သည်။
စကားအပြောအဆို မတတ်သည့်အတွက် သူတစ်ပါးလည်း ထိခိုက်နစ်နာစေပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အပြစ်ဖြစ်ပါသည်။
ပါးစပ်ကလေးလှုပ်၍ လေသံထွက်ပေါ်လာပုံချင်း တူသော်လည်း ထွက်လာသောစကား၏ အဓိပ္ပါယ်အလေးအပေါ့၊ အကျိုးအပြစ်၊ လိုရင်းရောက်မရောက် စသည်ဖြင့် စွမ်းအား (power) ချင်း ကွာခြားလွန်းလှသည်။ပါးစပ်ကလေးဟကာ အခက်အခဲမရှိပြောနိုင်တိုင်း စကားတစ်ခွန်းကို အလွယ်တကူမပြောသင့်ပါ။
စကားတစ်ခွန်းသည် ပြောသူ၊ နားထောင်သူ၊ အခြားတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးတော့ရရှိပါမှ တန်ဖိုးရှိပေမည်။
လွယ်လွယ်ပြော၍ရသောကြောင့် လူတော်တော်များများက စကားကိုလွယ်လွယ်ပြောတတ်ကြ၏။အမှန်ဆိုလျှင် ကိုယ့်ပြောစကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို သတိထားဆင်ခြင်ပြီးမှသာ နှုတ်မှဖွင့်ဟသင့်ပါသည်။
ပညာရှိတို့သည် စကားတစ်ခွန်းကို အလွယ်တကူမပြောတတ်ကြပါ။စကားကို ခြွေတာကြပါသည်။မပြောမဖြစ်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်မှ ပြောကြသည်။
ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး Diogenes က “We have two ears and only one tongue in order that we may hear more and speak less.” (ကျွန်တော်တို့မှာ နားရွက်နှစ်ဖက်ရှိပြီး လျှာတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ထို့ကြောင့် များများနားထောင်၍ နည်းနည်းပြောပါ) ဟု သတိပေးထားပါသည်။
တစ်ခါတလေ ကိုယ်က စေတနာအရင်းခံနှင့် အမှန်အတိုင်းပြောသည့်စကား ဖြစ်သော်လည်း တစ်ဖက်သားက အဓိပ္ပါယ်လွဲ၍လက်ခံတာမျိုး၊ ကိုယ့်စေတနာကို ပြောင်းပြန်မြင်တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကျသည့်နှစ်က ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စာမေးပွဲအောင်ပါသည်။သူက အင်ဂျင်နီယာလိုင်း မှန်းထားသူဖြစ်၏။အမှတ်စာရင်းထွက်လာသောအခါ အင်ဂျင်နီယာလိုင်းကို မမီခဲ့ပေ။ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းစိတ်အားငယ်မည်စိုး၍ အားပေးစကားအနေနှင့် “ရိုးရိုးမေဂျာနဲ့ပဲ မဟာသိပ္ပံတို့၊ မဟာဝိဇ္ဇာတို့ ယူလည်းရတာပဲ” ဟု ပြောလိုက်မိသည်။
ထိုနေ့မှစပြီး သူ ကျွန်တော့်ကို စကားမပြောတော့ပါ။ကျွန်တော်က စာမေးပွဲကျလို့ သူအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာကို မနာလိုဖြစ်နေကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းမပီသကြောင်း၊ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျကြောင်း လျှောက်ပြောသည်။
ထိုစဉ်ကတော့ ငယ်သူချင်းမို့ စေတနာကို တလွဲထင်ရကောင်းလားဟု မာနချင်းပြိုင်ကာ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကိုမခေါ်တော့ပါ။အသက်အရွယ်တွေရ၊ အိမ်ထောင်တွေကျ၊ သားသမီးတွေရပြီး ကျောင်းတော်ကြီးမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ အတူဆုံကြတော့မှ အပြန်အလှန်တောင်းပန်ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ Saying nothing is better than saying any error. ဆိုသကဲ့သို့ ‘အမှားတစ်ခုခုပြောတာနဲ့ စာရင်၊ ဘာမှမပြောတာပိုကောင်းတယ်’ ဟု သဘောပေါက်လိုက်ပါသည်။
တစ်ဖက်လူအပေါ် စေတနာထားသည်မှန်သော်လည်း ကိုယ့်စကားမှန်ဖို့၊ ထိုသူမှာလည်း တကယ်အကျိုးရှိနိုင်ဖို့လိုပါသည်။လောကမှာ အပြောသင့်ဆုံးစကား နှစ်မျိုးသာရှိပါသည်။
မှန်လည်းမှန်၊ အကျိုးလည်းရှိပြီး တစ်ဖက်လူနားထောင်ချင်သော စကားနှင့် မှန်လည်းမှန်၊ အကျိုးလည်းရှိသော်လည်း တစ်ဖက်လူနားမထောင်ချင်သော စကားတို့ဖြစ်သည်။
သည်တော့ စကားတစ်ခွန်းပြောမည်ဆိုလျှင်၊ ထိုစကားသည် တစ်ဖက်သားနားထောင်ချင်စိတ် ရှိချင်လည်းရှိမည်။ရှိချင်မှလည်းရှိမည်။မလွဲမသွေရှိအပ်သည့် စကားအရည်အချင်းကတော့ မှန်ကန်၍ အကျိုးကျေးဇူးရှိရန်သာဖြစ်၏။
မှန်သောစကား (သစ္စာစကား) သည် အလွန်အင်အားကောင်းပြီး၊ အကျိုးလည်းကြီးမားပါသည်။
ငါးရာ့ငါးဆယ်၊ ဝဋ္ဋကဇာတ်တွင် ဘုရားလောင်းသည် ငုံးငှက်ဘဝဖြစ်ခဲ့၏။ဥမှပေါက်ပြီး မကြာသောအချိန်တွင် သူနေသောတောအုပ်၌ မီးလောင်လေ၏။တိရစ္ဆာန်ပေါင်းစုံတို့လည်း တောမီးမှလွတ်ရာသို့ ပြေးကုန်၏။အလောင်းတော် ငုံးငှက်၏ မိဘနှစ်ပါးသည်လည်း တောမီးကိုကြောက်၍ ကိုယ်လွတ်ပြေးကြပြန်၏။ငုံးငှက်ကလေးသည် မသွားနိုင်မပျံနိုင်နှင့် တောမီး သူ့ကိုလောင်ကျွမ်းမည့်အချိန်ကို စောင့်မျှော်နေရရှာ၏။ထိုအခါ ငုံးငှက်ငယ်သည် သစ္စာစကားဆိုလေသည်။
“ငါ့မှာအတောင်များရှိပါသော်လည်း မပျံနိုင်ပါ။ငါ့မှာခြေထောက်ရှိသော်လည်း မလျှောက်နိုင်ပါ။မိဘနှစ်ပါးရှိသော်လည်း ထွက်ပြေးကြလေပြီ။ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့် အသင်တောမီးသည် ငါ့ကိုမလောင်စေသတည်း”
အလောင်းတော် ငုံးငှက်၏ သစ္စာစကားကြောင့် တစ်တောလုံးကို အရှိန်ပြင်းစွာလောင်နေသောမီးသည် ငုံးငှက်ကလေးရှိသည့် နေရာတစ်ဝိုက်ကို လုံးဝမီးမလောင်ခဲ့ပေ။သစ္စာစကား၏ အကျိုးအာနိသင်ကား ကြီးမားလှလေသည်။
သစ္စာစကားဆိုသူမှာ စိတ်သန့်ရှင်းသည့်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု (self-confidence) အပြည့်အဝရှိသည်။မုသားစကားဆိုသူမှာ တစ်လောကလုံးကိုညာလျှင် ညာနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း သူ့ကိုယ်သူတော့ ညာ၍မရနိုင်ပေ။ထို့ကြောင့် သူ့စိတ်မသန့်ရှင်းသည့်အတွက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ ထိတ်လန့်အားငယ်မှုတို့ဖြစ်ကာ self-confidence လုံးဝမရှိနိုင်ပေ။
(တစ်ခါတရံ) မှန်သော်လည်း ဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိ (အကျိုးပင်ယုတ်လျော့စေတတ်သေးသည်) သော စကားမျိုးလည်းရှိ၏။ခြေထောက်မသန်မစွမ်းသောသူကို “လမ်းလျှောက်တာ ထော့နဲ့ထော့နဲ့နှင့်” ဟု ပြောတာမျိုး၊ ရုပ်ရည်အကျည်းတန်သူကို “ရုပ်ကလည်း ဆိုးလိုက်တာလွန်ရော” ဟု ပြောတာမျိုးသည် စိတ်ဓာတ်သေးသိမ် ညံ့ဖျင်းသူတို့ ပြောလေ့ရှိ၏။
အခြေအမြစ်မရှိသည့် ကောလာဟလစကား (rumour) မျိုး၊ အသိဉာဏ်တစ်စုံတစ်ခု မရရှိနိုင်သော ညစ်ညမ်းပေါ့ပျက်သည့် စကားမျိုးသည်လည်း အကျိုးမရှိ သိမ်ဖျင်းယုတ်ညံ့သောစကား (သမ္ဖပ္ပလာပဝါစာ) ဖြစ်၍ မပြောဆိုသင့်ပါ။အချိန်ဖြုန်းရုံသက်သက် မည်ကာမတ္တစကားများသာဖြစ်၍ အကျိုးမရှိဘဲ အကျင့်ပျက်ရုံသာရှိပေမည်။
ဆဲဆိုတိုင်းထွာသော၊ မောက်မာရိုင်းစိုင်းသော၊ မာန်မဲဟိန်းဟောက်သော၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီး ဘဝင်မြင့်ကာ တစ်ဖက်သားကိုချိုးနှိမ်သော၊ ကြမ်းတမ်းသောစကား (ဖရုသဝါစာ) သည်လည်း တစ်ဖက်သားအတွက် ထိတ်လန့်အားငယ်စိတ်၊ ဒေါသမာနစိတ်ဖြစ်စေသောကြောင့် မပြောဆိုသင့်ပါ။ကြမ်းတမ်းယုတ်မာသောစကားကို ကိုယ်တိုင်လည်း မခံယူချင်ကြသလို၊ ဘယ်သူကမှလည်း မခံယူချင်ကြပါ။
တချို့အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ၊ ရာထူးကြီးမြင့်သူ၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာသူ၊ ရုပ်ရည်ချောမောသူ၊ မျိုးရိုးမြင့်သူ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတို့သည် ကိုယ့်ထက်နိမ့်သူတို့အပေါ် မောက်မောက်မာမာ ပြောဆိုကြသည်။ဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ပြောဆိုကြသည်။သူတစ်ပါးဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းမလေးစား၊ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း တန်ဖိုးမထားတတ်သူများဖြစ်၏။တစ်ဖက်စီးနင်း ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောသည့်စကားမျိုး၊ အသံမျိုးကို လူ လူချင်းမဆိုထားနှင့် အသိဉာဏ်မရှိသည့် တိရစ္ဆာန်ပင်မကြိုက်ပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ပိသုဏဝါစာ ဖြစ်မည်ထင်သည်။သူတစ်ပါးဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းအောင်၊ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်၊ အချစ်ပျက်အောင်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မညီညွတ်အောင် ပြောဆိုသောစကားမျိုးဖြစ်၍ အလွန်အောက်တန်းကျပေသည်။
မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကြားမှာပြောလျှင် ထိုမိတ်ဆွေအချင်းချင်း အခင်မင်ပျက်မည်။သတ်ကြဖြတ်ကြသည်အထိဖြစ်ကာ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ ပျက်စီးနိုင်သည်။လင်မယားကြားမှာပြောလျှင် သူများအိမ်ထောင်ရေး ပျက်ပြားမည်။မိသားစုအသိုက်အမြုံတစ်ခု ပျက်စီးသွားပေလိမ့်မည်။
လူ့လောကတွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ‘ကံ’ ကား ပဉ္စာနန္တရိယကံဖြစ်သည်။သေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ငရဲသို့ မလွဲမသွေကျရောက်စေသော အကုသိုလ်ကံဖြစ်လေသည်။
(၄) ဘုရားရှင်အား သွေးစိမ်းတည်အောင်ပြုခြင်းနှင့်
ညီညွတ်နေသော ရဟန်းသံဃာတို့ကြားတွင် ညီညွတ်မှုပျက်ပြားအောင်၊ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ပြောဆိုသော စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း အပ္ပါယ်သို့သွားရပေမည်။ဗုဒ္ဓသာသနာကို စောင့်ရှောက်နေသော ရဟန်းသံဃာတို့ကို နှောင့်ယှက်ခြင်းကြောင့် သာသနာကိုဖျက်ရာလည်း ရောက်ပါသည်။
စကားတစ်ခွန်းကြောင့် လူအချင်းချင်း မုန်းတီးသွားနိုင်သည်။ချစ်ခင်လာနိုင်သည်။လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဟူသော အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပြီး အပ္ပါယ်လားနိုင်သကဲ့သို့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာဟူသော ကုသိုလ်တရားတွေပွားများပြီး သံသရာဆင်းရဲမှပင် လွတ်စေနိုင်ပါသည်။
စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အိဿာ၊ မစ္ဆရိယဟူသော မနာလို၊ ဝန်တိုမှုတွေနှင့် ပူလောင်နိုင်သကဲ့သို့ ကရုဏာ၊ မုဒိတာဟူသော ကြင်နာသနားစိတ်၊ ဝမ်းမြောက်ပီတိစိတ်များနှင့် အေးချမ်းနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် မိမိ၏စကားတစ်ခွန်းနှင့် အခြားသူတွေကို ဒုက္ခဝေဒနာခံစားစေမည်လား၊ သုခဝေဒနာစံစားစေမည်လား စဉ်းစားချင့်ချိန်သင့်ပေသည်။ပြောသူက ပညာသတိနှင့် ဆင်ခြင်ပြောသင့်သကဲ့သို နားထောင်သူကလည်း ပညာသတိနှင့် ဆင်ခြင်နားထောင် သင့်သည်။
ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းနှင့် သူ့အသက်ကို သတ်မှာလား၊ ကယ်မှာလား။ဘဝပျက်စေမှာလား၊ ဘဝဆက်စေမှာလား။ဆင်းရဲသွားစေမှာလား၊ ချမ်းသာလာစေမှာလား။ဆုံးရှုံးစေမှာလား၊ အောင်မြင်စေမှာလား။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ။ The value ofaspeech is infinity for both of merit and evil. ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် နှစ်ခုလုံးအတွက် ‘စကားတစ်ခွန်း’ ၏ တန်ဖိုးသည် အတိုင်းအဆမရှိပါ။
ဧပြီ - ၃၀